android ဖုန်းများအတွက် Calculator ကိုဓာတ်ပုံ Vault app ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဓါတ်ပုံပညာ Apps ကပ » Calculator ကိုဓာတ်ပုံ Vault - Hide & amp ဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများ
Calculator ကိုဓာတ်ပုံ Vault - Hide & amp ဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများ APK ကို
ဖို့အကောင်းဆုံးဂဏန်းတွက်စက်ဓာတ်ပုံကို Vault ကိုသုံးပါ ဓါတ်ပုံတွေကိုဖုံးကွယ်, ဓါတ်ပုံများဖုံးကွယ်, ဗွီဒီယိုများဖုံးကွယ်ဒီ privacy ကိုလုံခြုံရေးအဘို့အမြင့်မားဝယ်လိုအားရှိသည်သောအသုံးပြုသူများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးသော PrivacySafe (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hld.anzenbokusu) ၏ရုပ်ဖျက်ပေးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
Long ကစာနယ်ဇင်းမှာ "Calculator ကို" ၏ခေါင်းစဉ်: - ဟာ PrivacySafe နည်းလမ်းရိုက်ထည့်ပါ။
- အမြန် PrivacySafe နည်းလမ်းရိုက်ထည့်ပါ: အ PIN ကိုဝင်ရောက်ပြီးနောက်စာနယ်ဇင်း "=" (ဒီနည်းလမ်းအချိန် PIN နံပါတ်ဖို့ PIN နံပါတ်ဒါမှမဟုတ်သော့ဖွင့် mode ကိုသတ်မှတ်ထားရန်လိုအပ်), နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, လက်ဗွေမှတဆင့် access ကိုထောကျပံ့ပေးပြီးသားအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားသော device ကို။
PrivacySafe အလွယ်တကူသင်၏ဓါတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်တခြားသူတွေချင်ကြပါဘူးအခြားဖိုင်တွေဖုံးကွယ်နဲ့စာဝှက်ရန်စိတ်ကူး privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက် App ဖြစ်ပါတယ်။
PrivacySafe က၎င်း၏ app ကို icon ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်လုံးဝလုံခြုံသငျသညျ privacy ကိုထိန်းထားနိုင်တယ်။ သင်ဤလုံခြုံအာကာသအတွင်းသင်၏ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်များနှင့်ဗီဒီယိုများကိုတင်သွင်းနိုင်ပြီး, ဘယ်သူမှ၏တည်ရှိမှုသိတယ်။
ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, PrivacySafe လှပတဲ့ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အံ့သြဖွယ်မီဒီယာ browse အတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းသည်။
အဆိုပါ AES encryption algorithm မှတဆင့် [Vault] သင်သည်အခြားသူများနှင့်မျှဝေချင်ကြဘူးသောအကြောင်းအရာနှင့်ဖိုင်ကို format ကိုမဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအရွယ်အစား, ဒါပေမယ့်လည်းပုံနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုများတာကိုထောကျပံ့ encrypt လုပ်။
[Browser ကို] ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို traceless download ။
အခြားသူတွေကို app ၏တည်ရှိမှုကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြင် [အိုင်ကွန် Hide] ။
သင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အရာအားလုံးသို့မှသာ [Shake ပိတ်] ဖုန်းကိုလှုပ်ခါပါလျင်မြန်စွာ, app ကိုပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
[ကျူးကျော် Selfie] သို့ချိုးဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတစ်စုံတစ်ဦးကစိုးရိမ်ပူပန်မနေပါနဲ့။
တောင်မှအခြားသူများ [အတု Password ကို] တစ်ခုအဆင်မပြေအနေအထား, သင်ကအရမ်းအေးဆေးဖြစ်လိမ့်မည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သော့ဖွင့်ဖို့ပိုမြန်ပိုလုံခြုံလမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးရန် [လက်ဗွေသော့ဖွင့] ။
[အရောင်အသွေးစုံသော Theme] သင်၏သီးသန့်ဆောင်ပုဒ်ကိုဖန်တီးရန်ဖက်ရှင်အရောင်တစ်ဦးကအမျိုးမျိုးဆိုပွဲ။
---------- အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ----------
https://youtu.be/mgA4KFnd_rc: PrivacySafe သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
သို့မဟုတ်သင်ပြီးသားအကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရပြီဆိုပါက, သင်သည်သင်၏ account ကိုအီးမေးလ်ကအတည်ပြုကြောင့်ပြန်လည်ရယူနိုငျပါသညျ။
encrypt လုပ်ထားတဲ့ file ကို restore လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
စာဝှက်ထားတဲ့ဖိုင်ပေါ်မှာ Long ကစာနယ်ဇင်းပုပြင်ဆင်ရန် mode ကိုဝင်ပါလိမ့်မယ်, သင် action ကိုဘားထဲမှာ restore button ကို အသုံးပြု. ကြောင့် restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
Long ကစာနယ်ဇင်းဖွင့်ရန် "Calculator ကို" ၏ခေါင်းစဉ်ကို။
သိကောင်းစရာများ: ရှည်လျားသောစာနယ်ဇင်းခေါင်းစဉ်ကသော့ဖွင့မရနိုငျသောအမှုရှိပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့ကို Long Press ကခေါင်းစဉ်များကသော့ဖွင့်တားမြစ်ချက်သော switch ကိုဖွင်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ မှ (က Galaxy မမှန်ကန်) http://t.cn/Rn11KMc သို့မဟုတ် "* # * # 1397 # * # *" ​​ခေါ်ဆိုပြီးနောက်ဖုန်းဖြင့်အရေအတွက်က dial: ဤကိစ္စတွင်မှာ, သင်က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ဖို့စနစ်တစ်ခုကို browser ကိုသုံးနိုင်သည် အဆိုပါ Long ကစာနယ်ဇင်းခေါင်းစဉ်များကသော့ဖွင့်တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုသက်ဆိုင်ရာ settings ကိုစစ်ဆေးသို့မဟုတ် disable, အ PrivacySafe ကိုစတင်ပါ။
ဂဏန်းတွက်စက် Vault, အကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ဖိုင်တွဲဓာတ်ပုံ Vault ဓာတ်ပုံ hider, ဖိုင် Vault, ပြခန်း Vault, အတုဂဏန်းတွက်စက်, သူလျှိုဂဏန်းတွက်စက်, ရုပ်ပုံ hider, လြှို့ဝှကျခ Vault, ရုပ်ပုံ Vault, ရုပ်ပုံလုံခြုံ, လုံခြုံ, သော့ခတ် box ကိုစောင့်ရှောက်
- Added ပြောင်းလဲမှု Calculator ကိုအိုင်ကွန် settings ကို
- တည်ငြိမ်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်အချို့ bug တွေ Fix
Calculator ကိုဓာတ်ပုံ Vault - Hide & amp ဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများ
9.85 ကို MB